Yiziphi izinto ezibalulekile ze-Google Web Vitals kanye ne-Page Experience Factors? | Martech Zone
AbakwaGoogle bamemezele ukuthi i-Core Web Vitals izoba yinto esezingeni ngoJuni 2021 futhi ukukhishwa kulindeleke ukuthi kuqedwe ngo-Agasti. Abantu kuWebhusayithiBuilderExpert bahlanganise le infographic ephelele ekhuluma neGoogle ngayinye Amavidiyo we-Core Web (I-CWV) futhi Isipiliyoni sekhasi Izici, ukuthi uzikala kanjani, nokuthi ungazithuthukisa kanjani lezi zibuyekezo.
Yini ama-Core Web Vitals kaGoogle?
Izivakashi zesayithi lakho zikhetha amasayithi anokuhlangenwe nakho okuhle kwekhasi. Eminyakeni yamuva nje, i-Google ingeze izinhlobonhlobo zalezi zinqubo zokuhlangenwe nakho komsebenzisi njengezici zemiphumela yokulinganisa. AbakwaGoogle babiza lezi Amavidiyo we-Core Web, isethi yamamethrikhi ahlobene nokushesha, ukuphendula, nokuzinza okubukwayo, ukusiza abanikazi besiza ukukala ulwazi lomsebenzisi kuwebhu.
I-Google Search Central
Amavidiyo we-Core Web ayisethi yomhlaba wangempela, amamethrikhi agxile kumsebenzisi alinganisa izici ezibalulekile zomuzwa womsebenzisi. Balinganisa ubukhulu bokusebenziseka kwewebhu njengesikhathi sokulayisha, ukuxhumana, kanye nokuqina kokuqukethwe njengoba kulayishwa (ngakho-ke awuthethi ngephutha leyo nkinobho lapho ishintsha ngaphansi komunwe wakho - yeka indlela okucasula ngayo!).
Ama-Core Web Vitals afaka amamethrikhi amafushane ama-3:
Upende Olukhulu Kunayo Yonke (i-LCP): izinyathelo Nhlakanipho ukusebenza. Ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle womsebenzisi, i-LCP kufanele yenzeke ngaphakathi 2.5 imizuzwana yokuthi ikhasi liqala nini ukulayisha.
Ukubambezeleka Kokufaka Kokuqala (FID): izinyathelo ukusebenzisana. Ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle womsebenzisi, amakhasi kufanele abe ne-FID ye Ama-millisecond ayi-100 noma ngaphansi.
Ukuhlelwa Kokuhleleka Okuqoqekayo (CLS): izinyathelo ukuzinza okubukwayo. Ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle womsebenzisi, amakhasi kufanele agcine i-CLS ye 0.1. noma ngaphansi.
Ungathola umbiko kulawa ma-metric usebenzisa amathuluzi we-Google's Pagespeed Insights noma umbiko we-Core Vitals ku-Google Search Console
Umbiko we-Google Pagespeed Insights Umbiko we-CWV we-Google Search Console
Yini i-Google's Page Experience Factors?
The isipiliyoni sekhasi izinyathelo zesiginali zici zendlela abasebenzisi ababona ngayo isipiliyoni sokuxhumana nekhasi lewebhu. Ukulungiselela lezi zinto kwenza iwebhu ijabule kakhulu kubasebenzisi kuzo zonke iziphequluli zewebhu nezindawo, futhi kusiza amasayithi aguqukele kokulindelwe ngumsebenzisi kuselula. Sikholwa ukuthi lokhu kuzoba nomthelela empumelelweni yebhizinisi kuwebhu njengoba abasebenzisi bekhula bezibandakanya kakhulu futhi bengasebenza ngokushayisana okuncane.
Uyini Umthelela we-Core Web Vital SEO Kumakhi Wamawebhusayithi?
Usebenzisa imidwebo enemininingwane yezibalo, ucwaningo lwasekuqaleni, nezeluleko ezenzekayo, i-infographic Uyini Umthelela we-Core Web Vital SEO kuMakhi Wamawebhusayithi iphula ama-Core Web Vitals amasha weGoogle nokubuyekezwa kwesipiliyoni sekhasi, ukuthi i-CWV ibe nomthelela onjani ekusebenzeni komakhi wewebhusayithi ye-ecommerce, nokuthi ungayisebenzisa kanjani iwebhusayithi eyakhiwe kusetshenziswa umakhi wabo.
Nakhu okufakiwe ku-infographic, (ngezixhumanisi zokuxhuma ezigabeni ezifanele zomhlahlandlela womthombo):
Ukuwohloka yama-Core Web Vitals weGoogle nezibuyekezo ze-Page Experience nokuthi zisebenza kanjani
Insight ekuthintekeni kwabakhi beWebhusayithi kanye noCWV Pros / Cons wabo
Ukuhlaziywa kweWebhusayithiBuilderExpert Abakhi bewebhusayithi be-7 be-Ecommerce - Thenga, Wix, I-BigCommerce, Squarespace, Shift4Shop, Volusion, Square Online (3000+ URLs) - ihlolwe kuqhathaniswa ne-CWV, Server Response Times, kanye ne-Performance Score, kudeskithophu nakuselula
Uhlola kanjani iwebhusayithi yeCore Website Vitals
Amathiphu wokusebenzisa kahle yabakhi bewebhusayithi / amawebhusayithi
Nayi i-infographic ephelele, qiniseka ukuthi uchofoza ku-athikili yabo ebanzi ediliza isigaba ngasinye nokuthi ungakhetha kanjani uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe (i-CMS) olukwazi ukuseshwa ngokugcwele.
Tags: okubalulekile kwewebhu okuyisisekelocwvideskithophu vs iselulaukubethelafidgoogleimininingwane ye-googlepeededUkuphequlula okuphephile kwe-GoogleUkuminyaniswa kwesithombeupende omkhulu wokuqukethwemobile-nobunganeisipiliyoni sekhasiisibuyekezo sesipiliyoni sekhasiukuqonda okusheshisa amakhasinokuvikelekaseoisivinini sesizaiwebhusayithiWix